Hal Igaly Sidii Ugaxda Goray Ha Igu Goollaado! | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Hal Igaly Sidii Ugaxda Goray Ha Igu Goollaado!
Waxa Jimcihii lasoo dhaafay lagu Aasay Magaalada Berbera Eebbe naxariista Janno ha siiyee G/lle A/razaaq Yusuf Maxamuud, ka dib markii ay dablay abaabulani ay Arbacadii hore ku dileen degaanka degmada Sheikh ee Gobolka Saaxil.
Waxa loo baahanyahay in hoosta laga xariiqo in A/razaaq uu ka dhintay ugu horayn xaaskiisii iyo caruurtiisii, walaalihi, ilma adeeradii iyo dhamaan tolkiis oo dhan.
Cidda dilkan geysatay, waxa weeye koox la abaabulay, la hubeeyay, la maalgeliyay oo laga warhayay in ay fal denbiyeed gacanta kula jiraan. Dhamaan Madaxada amniga ee Wasaarada Daakhiliga iyo Madaxa Gobolka Saaxilba waa ka warqabeen, Talaabadii ku haboonaydna kamay qaadin.
Dilkan la dilay Taliyihii Booliska Gobolka Saaxil, waxa uu abuuray in laga aaminka baxo nidaamkii dawladnimo ee laga filaayay in uu dusha u rito amniga muwaadinka iyo Madaxada Somaliland. Waxa lays weydiinayaa, maxaa inamada hore loogu soo qaban waayay oo iminka markii ay dhaawaceen dawladnimadii iyo wada noolaashihii shacabka Gobolka Saaxiil iyo Degaamada ku xeeran loo soo qabqabtay!
Xiisadan qabyaaladaysan ee ka dhalatay dilkan Taliyaha, maxaa maamulka Siilaayo uga meel yaal oo uu ka qabanayaa. Ma Sidii kuwii tirada badnaa ee weeray xerada kabista Hargeisa, ee askarta ku laayay ayaa layska siidayn doonaa.
Mise, waxa la odhan doonaa, halayska dhaafo oo dawladu magdhaw ha siiso qoyskii Casayr laga dilay waayo, waxa hore u jiray saraakiil askari H/jecllo ahi ku dilay qorilugud oo aan la soo qaban.
Saraakiisha ciidanka ee lalaynaayo, ninka madaxda ah ee siduu doonayo isaga hadalaa, waxa uu doonona samaynaaya, waxa uu ka markhaati kacayaa dawlada la’aanta iyo nidaamkii dawladnimo ee Somaliland oo burbur qarka u saaran. Dadku marka ay waayaan dawlada iyo nidaam dawladeed oo uu aamino, waxa uu ku noqonayaa qabiilkii iyo reerkii uu ka dhashay si uu masaalixiisa iyo amnigiisa ugu ilaaliyo. Taas oo horseedaysa, bubur iyo nidaam la’aan degaankan ka dhalata.
Waxa isweydiin leh, haddii xaaladii amni ee dalku sidatantahay, waxa laga hadlayaana ay qabyaalada tahay oo aanay jirin wax dadka midaynaayaa, sidee bay u suuragelaysaa in doorasho baarlamaam iyo madaxtooyo ay dalkan uga dhacdo.
Hal Igalay Sidii Ugaxada Goray Ha Igu Goolaado!
Qore/ Maxamd Iidle Cabdulle- Hargeisa